Sochiin diddaa mastar pilaanii fi FDG Oromiyaa guutuu keessatti akkuma itti fufetti jira.
(Oromedia, Finfinnee, 05 Mudde 2015) Godina Shaggar kibba lixaatti diddaa mastarpilaanii mootummaa abbaa irree wayyaanee godhaa jiru itti fufe.
.Mormiin mastarpilaanii barattoota sadarkaa lammaaffaa Diilallaatin kan eegalame too ta’u itti fufun mana barnootaa sadarkaa lammaaffa Bantuuttis kan itti fufeedha.
Hirirri ijoollee Oromootin godhamee fi godhamaa jiru kan diina raase waan ta’eef diinni sodas kanarraa kan kaate barataa kutaa qalama malee waa takka harkaa hin qabnerratti afaan qawwee naannessitee garalaafina tokko malee hirbaata rasaasaa godhaa jirti.
Mana barumsa sadarkaa lammaaffa Diilalla hirira godhameen barattoonni afur kan miidhaman too ta’u ammaan tana hospitaala Kaatolikii walisootti yaalamaa jiru.
Kun kanumaan osoo jiruu mana barumsa Sadarkaa lammaffaa Baantutti hirira kaleessa taasifameen barataa tokko battala sanatti ajjeesameera.
Barattoota madaahani hospitaala geeffaman keessa barataan tokko kan du’e ta’uusa hubatameera.
Guyyaa har’a kanas barattoonni sadarkaa lammaaffa Harbuu Culullee hirira mormii mastarpilaanii godhaa kan jiranidha.
Previous Previous post: Diddaan Barattootaa Yunvarsitii Bulee Horaa Keessatti Kaé
Next Next post: Oduu Gaddaa: Dabalaa Xaafaa wareegame; ‘Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha!’